Lumen5: Weghachi ederede n'ime Vidio Omenala Jiri AI | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 25, 2018 Douglas Karr
Ọ bụghị mgbe ọ bụla na enwere m nnukwu obi uto banyere ikpo okwu nke na m na-edebanye aha ozugbo maka akaụntụ akwụ ụgwọ, mana Lumen5 nwere ike ịbụ ngwa vidiyo vidiyo mmekọrịta zuru oke. Ọ bụ ọrụ onye ọrụ dị ịtụnanya, ọ nwere oke ịhazi ya na-eme ka ihe dị mfe, ọnụahịa dịkwa mma na iche. A bụ ihe nnyocha video:
Lumen5 Social Video Platform Atụmatụ Gụnyere:
Ederede gaa na vidiyo - Gbanwee ngwa ngwa na ederede blog n’ime ọdịnaya vidiyo. I nwere ike ime nke a site na itinye RSS nri, itinye njikọ gị isiokwu, ma ọ bụ iyingomi na pasting ọdịnaya gị.
Arụ ọrụ akpaghị aka - Lumen5 webatara ojiji nke ọgụgụ isi na igwe mmụta iji wuo Mpaghara gị, dozie ederede gị, wee kọwaa mkpụrụ okwu. N'ezie, enwere ike gbanwee ihe niile site na iji onye wuru ya - mana ọ na - enye gị nnukwu isi ụlọ!
Media Library - Ọba akwụkwọ nwere ọtụtụ nde faịlụ mgbasa ozi anaghị akwụ ụgwọ, gụnyere vidiyo, onyonyo, na egwu.
Mbido nhọrọ - Hazie vidiyo gị ka ọ kwekọọ na anya nke akara gị. Nwere ike ịhọrọ site na ụfọdụ Akara ókwú ma ọ bụ bulite nke gị. Ọzọkwa, ị nwere ike bulite gị onwe gị logo na watermark!
Formdị vidiyo - Dabere na atụmatụ ị debanyere aha maka, ị nwere ike ịnye vidiyo na 480p, 720p, ma ọ bụ 1080p yana mee ka akụkụ ahụ bụrụ 16: usoro nhazi 9 ma ọ bụ usoro 1: 1 maka nyiwe dịka Instagram.
Njikọ Facebook - Na-ebugote vidiyo gị na Facebook na akaụntụ nkeonwe gị ma ọ bụ ibe Facebook gị.
N'ime nkeji ole na ole, enwere m ike ịmepụta ma hazie vidiyo a maka isiokwu m dere na nso nso a ndụmọdụ maka oge maka ndị ahịa.
Na, n'ime sekọnd enwere m ike ịmegharị vidiyo ahụ ma megharịa ya maka Instagram.
Wụpụta vidiyo Mgbasa Ozi Gị nke Mbụ
Tags: vidiyo facebookvidiyo instagramUgboko5mee vidiyoelekọta mmadụ videoonye na-eme vidiyo